गर्भावस्थामा कसरी राख्ने याै’न स’म्बन्ध, के कुरामा ध्यान दिने ? |गर्भावस्थामा कसरी राख्ने याै’न स’म्बन्ध, के कुरामा ध्यान दिने ? – हिपमत
शुरुभएको ३ मिनेटमै सकियो प्रदेश १ को संसद वैठक
गर्भावस्थामा कसरी राख्ने याै’न स’म्बन्ध, के कुरामा ध्यान दिने ?
कतिपय व्यक्तिले विवाहित जीवनमा पनि ह’स्तमै’थुन गर्ने गर्छन् । ह’स्तमै’थुन गर्ने कार्यमा अभ्यस्त भएपछि कतिपय व्यक्तिले कसरी आफू सजिलै यौ’न च’रमसुखको स्थितिमा पुग्ने भन्ने कुरा सिक्छन्  । विवाहपछि पनि यस्तो क्रम चल्ने भएकाले ह’स्तमै’थुन गर्ने गरिएको पाइन्छ । केही स्थितिमा आफूले ह’स्तमै’थुन गरेर यौ’न आनन्द प्राप्त गरेपछि आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमतीको यौ’नचाहना पूरा गर्नेतिर ध्यान दिँदैनन् र यस्तो स्थितिमा भने स’मस्या पर्छ ।
तर यौ’नसम्प’र्क गर्न नपाइएको स्थितिमा यदि दुवैले नै ह’स्तमै’थुन गर्न सकिने स्थिति भयो भने ग’र्भास्वस्थामा मात्र होइन, अन्य अवस्थामा पनि यौ’नसु’ख प्राप्त गर्न धेरै नै सहयोग गर्छ, जसले दाम्पत्य जीवनलाई बलियो बनाउँछ नै ।
के ग’र्भवस्थामा यौ-नस-म्पर्क राख्न हुन्छ ?
महिला वा ग’र्भको बच्चालाई केही नकारात्मक असर पर्ला कि भन्ने श्रीमान् वा हुनेवाला पितालाई चिन्ता हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, यस प्रश्नको जवाफ भने सजिलै पाइँदैन, किनकि यसबारे पहिले त अन्य कसैलाई वा चिकित्सकलाई सोध्नै सकिँदैन। त्यसैले उचित जानकारीबिना चासो र चिन्ता लिएर त्यसै बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यौ’नस’म्पर्कका बेला पा’ठेघरको मु’खमा लि’ङ्गले धक्का पुर्‍याउँदा वा महिलाले च’रमसुख पाउँदा पा’ठेघर खुम्चने ग’र्भे शिशुलाई छोपेर राख्ने झिल्ली च्या’तिन गई सं’क्रमण हुन सक्ने तथा शरीरमा आएको परिवर्तनले यौ’नस’म्पर्क नै गर्न अप्ठयारो हुने भएकाले यौ’नसम्प’र्क राख्नु त्यति उचित नभएको तर्क राखेको पाइन्छ ।
तर कतिपय चिकित्सक यसमा खास वैज्ञानिक आधार नभएको ठान्दछन् । मुख्य कुरा के हो भने स्वस्थ ग’र्भावस्थामा यौ’नस’म्पर्क राख्नलाई कुनै बन्देज छैन र आफ्ना यौ’न क्रि’याकलाप सुचारु रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यस्तो सामान्य अवस्थामा महिला तथा ग’र्भमा रहेको शिशुमा नकारात्मक असर गर्दैन । एकपल्ट विचार गर्नुहोस् त, सामान्यतया कतिपय दम्पतीलाई पहिलो केही महिनासम्म त ग’र्भवती भए/नभएको भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन, तर यौ’नस’म्पर्कलाई निरन्तरता दिन्छन् । अहिले चिकित्सा विज्ञानमा भएको विकासले मात्रै ग’र्भ रहेको केही समयमा नै थाहा पाइने भएको छ ।
ग’र्भावस्थामा शारीरिक असजिलोपनको अनुभव, सुन्दरतामा कमी तथा ग’र्भमा भएको बच्चालाई हानि पुग्छ कि भन्ने डर मनमा भयो भने यौ’नसम्प’र्कमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्छ । यौ’नसम्प’र्क नै नराखिँदा पति–पत्नीबीच दूरी बढ्ने क्रमको सुरुवात हुने वा सम्भावना बढ्न सक्छ । अन्य बेलामा जस्तै ग’र्भावस्थामा पनि यौ’न क्रि’याकलाप शारीरिक सामीप्यताका लागि मात्र नभई भावनात्मक सामीप्यताको निरन्तरता यसका लागि निकै सहयोगी हुन सक्छन् ।
यौ’न क्रि’याकलापमा दुवैको संलग्नताले ग’र्भावस्थामा महिलामा आउने शारी’रिक अनि तथा भावनात्मक परिवर्तनहरूप्रति जानकारी हासिल गरी यसप्रति सं’वेदनशील भएमा महिलाको शरीर तथा भावनालाई बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । यौ’नस’म्पर्ककै लागि पनि नयाँ आ’सनहरूका बारेमा खोज गर्न तथा सिक्न सकिन्छ । सोअनुसार नै आफूलाई ढाल्न सके दम्पतीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सकिन्छ । यौ’न स’म्पर्कबाट प्राप्त हुने चर’मसुखका कारण पा’ठेघरको तथा यौ’नाङ्ग क्षेत्रको मांसपेशीको कसरत हुन गई बलियो हुने अर्को थरीको तर्क छ ।
गर्भावस्थामा यौुनसुम्पर्क राख्दा के–के सावधानी अपनाउनुपर्ला  ?
ग’र्भावस्थामा महिलाको शरीरमा हा’र्मोनको मात्रामा उतारचढाव आउँदा कसैमा यौ’नचाहना कम हुन र कसैमा बढ्न पनि सक्छ । यस्तो बेलामा उहाँको भावनालाई ठेस पुग्ने गरी यौ’नसम्पर्कका लागि जोर–जबरजस्ती नगरी यौन क्रि’याकलामा संलग्न हुन पनि प्रयासरत हुनुपर्छ ।
अरू बेलाको भन्दा ग’र्भावस्थामा यौ’नस’म्पर्क राख्दा यसको आ’सनका बारेमा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ । कुन आ’सन सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा आफैंले प्रयोग गरेर पत्ता लगाउनु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । पुरुष माथितिर रहने अवस्थाको सट्टा छेउतिर वा महिला पुरुषमाथि बसेर वा पछाडिबाट गरिने सम्भोगका आ’सनहरू ग’र्भवती महिलाको लागि सजिलो सावित हुन सक्छ, तर कुनै पनि प्रयोगपछि आफ्नी श्रीमती वा यौ’न साथीसँग उसको अनुभवबारे कुरा गर्नुपर्छ । लि’ङ्गको प्रवेश नै नगराई यौ’न आ’नन्द पाउने वैकल्पिक उपायहरूको अवलम्बन पनि ग’र्भावस्थामा बडो आनन्ददायी साबित हुन सक्छ ।
यदि यौ’नस’म्पर्कपश्चात् यो’नि र’क्तश्राव, पेट दु’ख्नु वा ग’र्भ तु’हिन थाल्नु जस्ता अन्य कुनै लक्षण देखिएमा वा यो’निबाट पानी बगेमा यौ’नस’म्पर्क राख्न तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । आवश्यक परे चिकित्सकसँग स’म्पर्क राख्नुपर्छ । यदि दम्पतीमध्ये कसैलाई यौ’नरोग भएको आशंका छ भने त्यसको उपचार तथा क’न्डमको नियमित प्रयोग आवश्यक हुन्छ ।
बुधबार, बैशाख २४, २०७७मा प्रकाशित गरिएको
नेपाल–इजरायलबीच ‘इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल’मा बिहीबार हस्ताक्षर हुने
घुस लिएको आरोपमा तीन प्रहरी पक्राउ
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा लक्ष्यभन्दा बढी भन्सार राजस्व संकलन
एक विघा भन्दा बढीमा लगाइएको गाँजा नष्ट गरियाे
भेनेजुयला र इजरायल नीतिलाई निरन्तरता दिँदै बाइडन